Okusingqongileyo okumnandi kwechwebakazi. Ulwandle, ijethi kunye ne-sauna. - I-Airbnb
Okusingqongileyo okumnandi kwechwebakazi. Ulwandle, ijethi kunye ne-sauna.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnn & Leif
UAnn & Leif yi-Superhost
Indlu ibekwe kwindalo entle enolwandle nolwandle kufutshane. Kwindawo yokumisa u-4, kukho indlela esekunene ekukhokelela kwipropati. Kwiheji entle jikela ngasekunene kwaye uya kubona isango lentsimbi elikhandiweyo kwipropathi. Indlu intle kwaye ihonjiswe buqu ngokuthuthuzela okupheleleyo. Ikhitshi efanelekileyo yokupheka, i-dishwasher, umatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokulala elineebhalkhoni kunye nokujonga amanzi. Ukufikelela kwi-sauna, i-jetty kunye ne-sandy beach. Ukongeza, i-Sjöstuga enebhedi ezi-4 inokubhukishwa ukuba iyafuneka.
Ngaphandle kwento yokuba indawo yethu isondele kakhulu eStockholm naseWaxholm, imvakalelo yokuphumla iphelele. Ukwazi ukuqala usuku ngesidlo sakusasa kwi-pier okanye kwenye yeebhalkhoni zokulala kubeka ithoni imini yonke. Ukugqiba usuku nge-sauna kunye nediphu epholileyo yangokuhlwa kwenza ukuba umntu abe nexesha elide ngosuku olulandelayo.
abamelwane bahle kakhulu kwaye baluncedo. Ehlotyeni kusenokubakho iitrafikhi ezisuka okanye eziya enqanaweni. Sinesantya esimiselweyo kodwa sinokodlulwa ngabanye abaqhubi, ngoko ke kufuneka silumke xa abantwana nezinja behlala endleleni.
ITynningö sisiqithi apho ufika khona ngesikhephe semoto sisuka eNorra Lagnö, okuthetha ukuba sinabahlali abaninzi unyaka wonke abahamba besiya kwimisebenzi yabo besuka esiqithini. Isikhitshane semoto sinduluka esiqithini rhoqo ngeyure yonke kunye nemizuzu engama-20 kwiyure nganye epheleleyo (ifika kumhlaba omkhulu malunga nemizuzu emihlanu kamva kwaye ibuya kwangoko). Kwezinye iiyure zencopho, kwanemizuzu engama-20 kwiyure nganye epheleleyo.
Nangona kukho abemi abaninzi abasisigxina, esi siqithi siziva sizolile yaye sikhululekile.
Abona bamelwane bakufutshane kunye nabanini-ndawo bahlala esiqithini nakwezinye iidilesi. Kodwa ehlotyeni, ewe, uninzi lwabantu luphumile kwaye bonwabele ihlobo laseSweden.
Umbuki zindwendwe ngu- Ann & Leif
Vi har ett historieintresse och vill värna om vår fastighets ålder och ursprung. Våra intressen är att resa och bli inspirerade av historiska byggnader, inredning och matkultur. Vi vill dela med oss av den fantastiska skärgården och ger gärna en guidad tur med vår båt till öarna runt Waxholm eller till någon restaurang om det passar.
Vi har ett historieintresse och vill värna om vår fastighets ålder och ursprung. Våra intressen är att resa och bli inspirerade av historiska byggnader, inredning och matkultur. Vi…
Ukuba sisekhaya ngexesha lokuhlala kwakho, ngokuqinisekileyo sihamba kwisakhiwo kunye nakwi-pier xa sisebenzisa isikhephe sethu. Ke, sikwakhona ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna uncedo ngayo nantoni na.